Dowlada Sacuudiga oo sheegtay in aanay war u heyn meydka Khashoggi halka la geeyey… – Hagaag.com
Dowlada Sacuudiga oo sheegtay in aanay war u heyn meydka Khashoggi halka la geeyey…
Posted on 22 Oktoobar 2018 by Admin in World // 0 Comments
Dowladda Sacuudiga oo qiratay in lagu dhex dilay qunsuliyadeeda magaalada Istanbul wariye Jamal Khashoggi ayaa iminka sheegtay in aysan ka war hayn halka la geeyay meydka wariyaha.
Wasiirka arrimaha dibedda dalkaasi Adel bin Ahmed Al-Jubeir ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee AFP in eysan ka warhayn halka la geeyay ama lagu qariyay meydka wariyaha warkaas oo tuhumo kala duwan laga sameeyay.
Adel bin Ahmed Al-Jubeir ayaa sheegay in amiirka dalkaasi Maxamed Bin Salmaan oo lagu tuhmayay in uu isaga amarka bixiyay uusan “waxba” kala socon dilkaasi, waxaana uu intaa raaciyay in uu boqorka dalkiisu sheegay in dambigaasi loo haysto dadkii geystay.
Xukuumadda Riyadh ayaa qiratay dilka wariye Jamal Khashoggi (59-jir) kaas oo markii dad ugu wardambeysay la arkay isaga oo sii galaya gudaha qunsuliyada Sacuudiga ku leeyahay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga.
Dowladdu waxa ay sheegtay in wariyaha uu ku dhintay gacan-ka-hadal dhex maray isaga iyo saraakiil ku sugneyd qunsuliyadda, dabadeedna saraakiishaasi ay “qariyeen” faldambiyeedkaas.
Beesha caalamka ayaa Sacuudi Carabiya cadaadis ku saareysa in ay faahfaahin dheeri ah ka bixiso geerida qoraaga dalkaasi u dhashay ee Jamal Khashoggi.
Jamaal Khashoggi oo ahaa wariye dhaliila siyaasadda dhaxalsugaha da`da yar ee dalkaasi Maxamed Bin Salmaan, ayaa qunsuliyadda u tegey si uu u buuxiyo warqado uu ku guursan lahaa saaxiibtiis ,Hatice Cengiz oo u dhalatay dalka Turkiga.
Gabadhaas oo la socotay markii uu qunsuliyadda tagayey ayaan loo ogolaan in ay gudaha u gasho, sida uu nidaamku yahayna, Khashoggi waxaa uu iska reebay oo uu saaxiibtiis uga tagay telefoonkiisa gacanta, isagoona ku wargeliyay in ay booliska wacdo hadii uu soo noqon waayo.